News 18 Nepal || सीमामा एसएसबीको ज्याजती, जेकजाँच गर्न भन्दै नेपाली महिलामाथि छाडे कुकुर
सीमामा एसएसबीको ज्याजती, जेकजाँच गर्न भन्दै नेपाली महिलामाथि छाडे कुकुर
बुटवल । रुपन्देहीको नेपाल भारत सीमानाका सुनौलीमा भारतीय सुरक्षाबल एसएसबीले ज्याजती गरेको भन्दै नेपालीहरुले शनिबार २ घण्टा नाका अवरुद्ध बनाएका छन् । भारतीय पक्षले नेपालीहरुलाई भारततर्फ जान रोक लगाएको भन्दै उनीहरुले शनिबार नाकामा विरोध प्रदर्शन गर्दै नाका अवरुद्ध गरेका हुन् ।
भारततर्फबाट नेपाल आउनका लागि नाका खुला गरिए पनि नेपालीलाई भारत जान रोक लगाएपछि विरोधमा उत्रिएको उनीहरुले बताएका छन् । भारततर्फ किनमेलका लागि आएका नेपालीलाई एसएसबीले सीमापारि जान दिएको थिएन ।
बुटवलबाट किनमेल गर्न आएकी मुना भण्डारीले चेकजाँचका लागि लाइनमा बस्ता एसएसबीका सुरक्षाकर्मीले आफूलाई अभद्र व्यवहार गर्दै उनीहरुको तालिम प्राप्त कुकुर छोडिदिएको गुनासो गरिन् । एसएसबीले ज्यादती गरेको यो पहिलोपटक भने हैन ।
सीमामा एसएसबीको ज्यादती बारे यसअघि पनि कुरा उठ्दै आए पनि नेपाली सहेर बसेका थिए । शनिबार महिलामाथि कुकुन नै छोडेपछि नेपालीहरुको धैर्यले जवाफ दिएको हो । उनीहरुले बेलहिया अगाडि रहेको ब्यारिकेटर झारेर अन्तराष्ट्रिय नाका ठप्प पारेका थिए ।
यसअघि भारतकै व्यापारीहरुले एसएसबीको ज्यादती बढ्दै गएको विरोधमा दशगजामा एसएसबीविरुद्ध नै प्रदर्शन गरेका थिए । दशगजामै बसेका एसएसबीले नेपालबाट भारत जाने नेपालीलाई विभिन्न बहानामा दुख दिने गरेका छन् । आजको समाचारपत्रमा खबर छ ।
नेपालमा थप ३३७ जनामा कोरोना पुष्टि, एक जनाको गयो ज्यान
विद्यालयमा कक्षा कसरी सञ्‍चालन गर्ने ? यसो भन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालय
प्रधानमन्त्रीको गृहनगरमा सपिङ कम्प्लेक्स बनाउन सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर
स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्यो, “२५ जनाभन्दा बढी भेला नहुनु, स्कुल बन्द गर्नु”
नेपालमा थप २८८ जनामा कोरोना पुष्टि, कसैको गएन ज्यान
नयाँ भेरिएन्टको कोरोना देखिएसँगै डा. अनुप सुवेदीको चेतावनी
उपचारमा चित्त बुझेन ? यसरी गर्न सक्नु हुनेछ गुनासो
नेपालमा बढ्यो कोरोना जोखिम, आज पनि थपिए संक्रमित
चैत २८ गते शनिबार, यस्तो छ तपाईंको राशिफल
सांसद हटाएकाहरु मन्त्रीमा पुनर्नियुक्ति भएपछि यसो भन्छन् रावल
जब फिल्म सेटमै जया बच्चनले रेखाको गाला चड्काइन्
चैत २९ गते आइतबार, यस्तो छ तपाईंको राशिफल
कोभिड खोप वितरणलाई लिएर रिसाए डब्लुएचओ प्रमुख, दिए यस्तो संकेत
प्रचण्डको गोप्य खुलासा, “अर्को मदन भण्डारी भेटियो भनेपछि जालझेल सुरु”
समयमै सचेतना अपनाऔं भन्दै लकडाउन बारे प्रम ओलीको यस्तो संकेत